I-Peptide Epithalon Acetate: Ingabe ingenye isidakamizwa sokulwa nokuguga?
I-86 (1812) i-4514114	info@phcoker.com
I-1. Yini i-Epithalon Acetate?
I-2. I-Epithalon Acetate indlela yokusebenza
I-3. Izicelo ze-Epithalon Acetate
I-4. I-Epithalon Ukusetshenziswa kwe-Acetate yokubhekisela
I-5. I-Epithalon Izinzuzo ze-Acetate
I-6. I-Epithalon Acetate imiphumela emibi
I-7. I-Epithalon I-Acetate izimo zokugcina
I-8. Kuphi ukuthenga i-Epithalon i-acetate drug?
Wake wazizwa ngakho I-Epithalon acetate? Ingabe ucwaninga ngakho futhi ufuna ukwazi konke ngakho? Uma kunjalo, lesi sihloko sizokusiza ekutsheleni nge-Epithalin Acetate. Lesi sihloko sizoqukatha ulwazi olunzulu ngalesi sidakamizwa. Izingxenye ezihlukahlukene zalesi sihloko ziyoba kanje:
1. Yini i-Epithalon Acetate?
I-epithalon acetate (i-CAS: 307297-39-8) luhlobo lwe-peptide futhi luyaziwa nangokuthi isidakamizwa sokulwa nokuguga. Amanye amagama aziwa ngalo muthi yi-Epithalon, i-Epithalone, i-Ala-Glu-Asp-Gly, i-UNII-O65P17785G nokunye okuningi. Kuyaziwa ukuthi i-Epithalon Acetate, lakhiwa iSt. Petersburg Institute of Bioregulation neGerontology. Lesi sidakamizwa siyingxenye esebenzayo yokufaka ingubo encane etholakala ebuchosheni bethu eyaziwa ngokuthi i-pineal gland. Ngemuva kokucwaninga okuphelele, kutholakala ukuthi lo muthi ukwandisa ubude be-telomere kumaseli egazi abantu abaneminyaka engu-60-80years. Esifundweni esifanayo, kwafunyanwa ukuthi kulabo bantu abanikezwa lesi sidakamizwa i-90% yabantu babonise imiphumela emihle.
Ngokukhulisa ubude bama-telomere emaqenjini egazi aseqembu elidala, kusiza ekugcineni umzimba uhlale uqinile futhi unempilo.
Kuze kube manje, sazi ukuthi lesi sidakamizwa singasindisa impilo futhi singasebenza njengesidakamizwa esiphezulu se-anti-aging. Esikhathini esilandelayo, sizoxoxa ngenqubo ye-Epithalon Acetate izidakamizwa.
2. Epithalon I-Acetate Mechanism yesenzo
Ngosizo lwalolu phuzu, sizokwazi mayelana nokusebenza noma ukusebenza kwe-Epithalon i-acetate izidakamizwa ezenzweni. I-Epithalon acetate kubonakala sengathi i-powder emhlophe, le phophu ingaxubaniswa ngamanzi, kodwa kwezinye izimo, kukhethwa ukuxuba nesisombululo se-1% esincane se-acetic acid. Lesi sidakamizwa siphelele ngokuphelele ekamelweni lokushisa. Izithako ze-Epithalon i-acetate izidakamizwa yi-Epitalon ((S) -4- (S) -2-aminopropanamido) -5 - (((S) -3-carboxy-1 - ((carboxymethyl) amino) -1-oxopropan-2 -yl) amino) -5-oxopentanoicacid). Indlela yangempela yalo muthi ukuthi ingena ngaphakathi emzimbeni wesiguli onezifo ezithile noma eziningi, ngemva kokungena ngaphakathi komzimba wesiguli ngokuhlasela ngqo isakhi noma izicubu ezithintekile. Uma ngokuqondile ubulala amangqamuzana asakaza lesi sifo, ngokwenza lokho kubulala kahle lesi sifo.
3. Izicelo of Epithalon Acetate
Kuleli phuzu, sizokwazi mayelana nezinhlelo ze-Epithalon Acetate.
Ukuguga ukuguga-Isicelo sokuqala salesi sidakamizwa ukuthi kusiza ekucubungeni ukuguga. Lesi sidakamizwa sisetshenziswa kabanzi emhlabeni wonke ngenxa yalesi sizathu ikakhulukazi. Isidakamizwa se-epithalonacetate siphumelele ngezinhloso ezinjalo, izinhlobo eziningi zocwaningo emhlabeni wonke zenzekile, futhi imiphumela yocwaningo lonke ihle kakhulu, ayikho icala elibi kangaka, eliye lafika ocwaningweni.
Antioxidant-I-Epithalon Acetate izidakamizwa iphinde isebenze njenge-antioxidant. Ngosizo lwezinto ezincane ezikhona kulo muthi, abantu abaningi banezinzuzo ezinkulu. Ngosizo lwalezi antioxidants, umonakalo owenzelwe amangqamuzana omzimba wethu kusuka emsebenzini wethu wansuku zonke wehla. Lokhu ukwehlisa ukulimaza kwamaseli omzimba wethu kuyasiza ekwandiseni impilo yethu yonke. Izinzuzo eziningi eziningi zilezi zidakamizwa ze-Epithalon Acetate, ezisiza abantu abaningi laphaya nsuku zonke.
I-Telomere-Ukunye ukusetshenziswa kwalolu muthi ukuthi kusiza ekwandiseni i-thelength ye-telomere emaqenjini egazi. Imithi yale nhloso inikezwa kuphela kubantu abaneminyaka yobudala phakathi kwe-65 neminyaka eyi-80.
UcwaningoInjongo- Isicelo sokugcina salolu mithi ukuthi sisasetshenziselwa ukucwaninga ngezinkinga eziningi ezihlukahlukene ezilwaneni ezihlukahlukene. Ezimweni eziningi sithola imiphumela emihle kuphela, futhi uye wabulala izifo ezifana namangqamuzana omdlavuza nezinye eziningi, okwakungenakukwazi ukwenza imithi eminingi lapho.
4. Epithalon Izinzuzo ze-Acetate
Kunezinzuzo eziningi ze-Epithalon Acetate izidakamizwa ngaphandle inqubo yokulwa nokuguga kuphela, Sizoxoxa nezinye izinzuzo zalesi sidakamizwa esingaziwa kubantu abavela lapho-
♦ Ukwandisa impilo
Ngaphambi kokusebenzisa le mithi kubantu, uphenyo lwenziwe ezilwaneni eziningi lapho kungekho zilwane ezilimala khona; ngakho-ke umphumela walabo baphenyo weza njengokunyuka kwe-11 kuya ku-17percent yeminyaka yalezi zilwane. Kwezilwane ezihlukahlukene, ukuphila kwe-crease kwakuhlukile.
Ngemuva kokusesha kwezilwane kulezi zilwane, emva kwalokhu lesi sidakamizwa senziwe ukuba sisetshenziselwe abantu futhi lapho le mithi ibonise imiphumela emihle futhi. Njengoba kufanele wazi ukuthi njengamanje yonke impilo yabantu abaphila iseduze cishe ne-40 kuya eminyakeni engu-50 cishe kakhulu, ngakho-ke ngokusetshenziswa kwalesi sidakamizwa singakwazi ukwandisa lokhu kuphila kuze kube yizingxenye ze-16. Ukuphila okungaholela eminyakeni ye-60-70.
♦ Ukwandisa umsebenzi we-enzyme
Uma umuntu ekhula athengiswa ngoba ama-enzyme avela emzimbeni aqala ukwehla ngokulingana kakhulu. Ngakho-ke, uma kunjalo, i-epithalon acetate izidakamizwa ingasiza ekwandiseni imisebenzi ye-enzyme emzimbeni wethu.
Lezi zenzo ze-enzyme zithinta izenzo ezenzeka ngaphakathi emzimbeni wethu ngosizo lwazo zonke imisebenzi zomzimba wethu ezenzekayo. Lokhu kwehla emisebenzini ye-enzyme kwakuyinkinga enkulu ngoba abantu babengakwazi ukuthola izinkinga emva kwezinhlobo eziningi zokucwaninga nge-enzyme umsebenzi owaziwayo.
♦ Ukuvinjwa kwe-Melatonin kanye nesimiso se-circadian
Ake ngiqale ngikutshele konke ukuthi ukuvimbela kwe-melatonin kanye nezilinganiso ze-circadian.Melatonin ikhiqizwa yi-pineal gland, etholakala ebuchosheni bethu, lokhu okuyimfihlo akubalulekile, kodwa kuyadingeka kakhulu ngoba ngalokhu kukhishwa imiphumela eminingi engokwengqondo futhi ukuziphatha kwabantu kuhlobene. Ngenkathi isigqi se-circadian yinkqubo yangaphakathi futhi imvelo ngokwemvelo, lokhu kusiza ukona umjikelezo wokulala wonke umuntu.
Kulokhu, i-epthalon i-acetate imithi isiza ngezinqubo ezihlukahlukene njengokungathi ngeke kube nemiphumela emibi engokwengqondo, futhi le mithi nayo iyasiza ekujikelezeni okungcono kokulala. Labo abanzima ukulala lapho kunjalo lesi sidakamizwa sinenzuzo kakhulu kubo.
♦ Ulwa nomdlavuza
Phakathi nokucwaninga okwenziwe ngezinga kanye namagundane, ngesikhathi somphumela walabo baphenyo, sithole ukuthi le epithalon yenza izidakamizwa zikhiqize amangqamuzana anjalo anisiza ekufeni kwamangqamuzana omdlavuza. Ngemva kokukwazi lokhu, izilwane eziningi ezinomdlavuza zanikezwa umthamo walesi sidakamizwa, futhi ngokumangalisa ukuthi zelapha ngokwanele, njengoba umuthi wenza zonke izifo zomdlavuza zife.
Ngemuva kokuba lezi zicwaningi zenziwe ngempumelelo, lo muthi wanikezwa iziguli zesifo somdlavuza womuntu, futhi kuzo zonke izidakamizwa, lesi sidakamizwa sasebenza kahle, futhi kwezinye izimo, saphulukisa ngokuphelele. Lesi sidakamizwa sisebenza ngokuqondile ezingxenyeni ezithile kanye nezakhi zofuzo ezidala umdlavuza emzimbeni womuntu.
Lesi sifo uhlobo lwesifo seso; Kulesi simo, izintambo ezikhona emehlweni omuntu ziyancipha. Lesi sidakamizwa sisiza ekwelapheni kwalesi sifo seso. Lesi sifo siphinde siphulukiswe ezilwaneni; ngisho nalapho ucwaningo lithatha indawo yezilwane, ngaphezulu kuka-90% yezilwane kwakuphiliswa kahle. Ngemuva kwalokho, lapho lo muthi unikezwa iziguli zabantu cishe mayelana neziguli ezingu-90% zalashwa kulesi sifo.
♦ Ithuthukisa i-antioxidant
Ngikhulume ngenhla mayelana nokusetshenziswa nokubaluleka kwama-antioxidants. Banciphisa inqubo yokulimaza iseli, ngosizo esinciphisa inqubo yokuguga. Zonke izinsizi zitholakala lapho kucwaningwa khona izilwane. Ngemva kokwazi ukuthi lo muthi usiza ekwenzeni ngcono i-antioxidant, lesi sidakamizwa sanikezwa izilwane ezingenayo i-antioxidant, futhi ngemva kokucwaninga, kwaqaphela ukuthi lo muthi usiza ekuthuthukiseni i-antioxidants emzimbeni wesilwane. Ngemva kokubona imiphumela emihle, lesi sidakamizwa sanikezwa iziguli ezinesifo esinjalo, lesi sidakamizwa esiphikisayo sanikezwa, futhi sazisiza ekunciphiseni inqubo yabo yokulimaza cell.
5. Epithalon I-Acetate imiphumela emibi
Njengoba kufanele wazi ukuthi konke kunomphumela omuhle neminye imiphumela emibi futhi. Same yilokho okwenziwa nalesi sidakamizwa se-epithalon acetate. Kuze kube manje, wazi ngezinzuzo zalesi sidakamizwa, kodwa ngalesi sikhathi, uzokwazi ngomphumela wecala lomuthi. Izinhlobo eziningi zocwaningo zenziwe, kodwa kuze kube manje, asizange sithole umphumela ohlangothini ovela kulo muthi. Ukuphela komthelela ohlangothini esiwutholayo ukuthi njengoba sixoxile ukuthi i-epithalon acetate izidakamizwa kusiza ukwandisa ubude be-telomere egazini legazi labantu abaneminyaka engu-60 kuya ku-80 iminyaka. Umphumela ohlangothini wukuthi kwezinye izimo lokhu, umuthi wenze neminye imiphumela emibi futhi.
Lo mphumela ohlangothini, kwezinye izimo, uye wakhuphuka kangangokuthi impilo yabantu ibuye ilahlekelwe ngalomphumela ohlangothini.
Lokhu kwakuwukuphela komthelela ohlangothini esiwubonile kuze kube manje emva kokusetshenziswa kwalesi sidakamizwa iminyaka eminingi. Lesi sidakamizwa yisidakamizwa esindisa ukuphila, kodwa amacala angenzi kahle, noma singasho ukuthi kuboniswe ngokuphambene kuseduze namacala we-10%, kuyilapho ku-90% amacala aphilisa izinkinga zeziguli. Lokhu kwenza isidakamizwa engozini kwezinye izimo, azitholanga lutho olunjalo lokuthi kungani kwezinye izimo le mithi engasebenzi kahle, izinhlobo eziningi zocwaningo mayelana namacala okuphosa zenziwe, kodwa akukho lutho olufika ezandleni zethu.
6. Epithalon aukusetshenziswa kwalokhu kokubhekisela
Zonke izidakamizwa zinesilinganiso esifanele, futhi lokhu okuyisidakamizwa esibalulekile kunesisindo esifanele, kanti uma umuntu engathathi lo muthi ngokusho kwesilinganiso, khona-ke ungabaphatha kabi. Ngakho usazise ngesilinganiso esifanele salomuthi, sicela ubheke kahle.
Isilinganiso salesi sifo sincike kwisifo saleso sifo osithatha lesi sidakamizwa. Kunezindlela ezintathu ezihlukene nezinhlobo ezintathu ezihlukene zokulinganisa, futhi zingcono kakhulu, ziphumelela futhi ziphumelela kakhulu. Kuncike ekutheni ukuthi yikuphi uhlobo lokulinganisa okumelwe uthathe, ungaxhumana nodokotela wakho mayelana nomthamo. Ngakho umthamo uwukuthi:
Isilinganiso se-epithalon i-acetate (okungenani isebenza kahle)
Ubude besikhathi-Lo muthi kufanele uthathwe emva kwesikhathi esifanele, futhi ngenxa yesidakamizwa esingasebenzi, kufanele uthathe le mithi phakathi kwe-10 ezinsukwini ezingu-20.
Isilinganiso-Lokhu kusho ukuthi malingakanani umuthi okufanele uwuthathe, futhi yi-400 ku -600 mg ye-Epithalon ngosuku.
I-DailyFrequency- Imvamisa yansuku zonke yalo muthi i-200 mg ngayinye yokukhonza.
I-Epithalon I-Acetate isilinganiso (ukusebenza okuphakathi)
Lo muthi ungaphinda uhambe nge-spray nasemanzini, kule ndawo sizokwazi mayelana nomthamo onjalo.
Isikhathi-Ubude bomuthi onjalo bufana nalokho okungenhla, okuphakathi kwe10 kuya ezinsukwini ezingu-20.
Isilinganiso-Umthamo we-sprays kanye namaconsi uphakathi kwe-15 kuya ku-30 mg we-Epithalon ngosuku lwe-acetateper.
I-Dailyrequency- I-frequency yansuku zonke ingahlukaniswa ngama-servings amathathu ngosuku.
Isilinganiso se-Epithalon acetate esingenayo (iningingempumelelo)
Indlela yokugcina ngaphansi kwekhonji yokulinganisa yile ndlela yokujova. Ngale ndlela, umuthi unikezwa umjovo, futhi le ndlela yaziwa ngokuthi indlela engcono kakhulu futhi ephumelelayo kakhulu. Isilinganiso salendlela:
Ubude besikhathi-Ubude bendlela lefana nenye indlela, ephakathi kwezinsuku ezingu-10 ezinsukwini ezingu-20.
Isilinganiso-Umthamo walendlela yi-5 ku-10 mg ngosuku.
Ukuvama- Ukuvama kwalesi sifo kungumzimba owodwa ngosuku lwe-dose ephansi, kanti omunye angathatha ama-injection amabili ngosuku njengomlinganiselo ophakeme.
Inkambo yendlela ngayinye iwu-10 ezinsukwini ze-20, ngenkathi iqedile le nkambo yezinsuku ze-10-20 umuntu kufanele abe negebe eliphelele lezinyanga ze-4to 6, futhi ngemuva kwalokho, angaphinda imithi. Lesi saziso yizo zonke izifundo ezintathu.
7. Epithalon Izimo zokugcina ze-Acetate
Kumelwe ukuba waphawula ebhokisini lomuthi othile lapho babhalele khona ngezinhlamvu eziqaphile QAPHELA, ngaphansi kwalowo bhokisi banikeze isimo sokugcina salowo muthi. Imithi ethile iqukethe izinto ezinjalo kuzo ukuthi azikwazi ukugcinwa ngaphansi kokushisa kwekamelo. Ngakho-ke izidakamizwa ezinjalo, kunezimo ezifanele okufanele zifakwe kuzo futhi kufanele zikhishwe kuphela lapho kudingeka zisetshenziswe. Nalowo unayo I-Epithalon isitoreji se-acetate izimo, sizoxoxa ngalezo zimo lapha.
Isimo esisodwa esikhombisiwe lapha ukuthi kufanele sigcinwe endaweni epholile njengefriji.Kuthiwa uma kugcinwa endaweni eshisayo, lokhu kungalimaza lo muthi. Kuzo zonke, kuqukethe ama-peptide e-98% ahlanzekile, okufanele afakwe ngaphansi kwesimo esibandayo kuphela futhi akufanele agcinwe ngaphansi kokushisa okuqondile. Lokhu kungabuye kube nomthelela ekuhlanzeni kwamaphepathidi.
Lesi kwakuwukuphela kwesimo sokugcina esasikelwe ukugcina engqondweni.
8. Wlapha ukuthenga i-epithalon acetate drug?
Kukhona abathengisi abathile be-intanethi abathengisa lesi sidakamizwa, ngoba lesi sidakamizwa sinamanye amino acids. Ngakho uma ufuna ukuthenga i-epithalon acetate izidakamizwa, khona-ke ungayithola kalula ku-intanethi futhi unga buy epithalon actate. Iyakuthola ekhaya lakho ngaphakathi kwesikhathi esinikeziwe.
Kukhona abantu abaningi abaqhamuka ngaphandle, abathengisa imithi engalungile noma engalungile kuyi-inthanethi, kufanele ucwaninge kahle inkampani nomthengisi kusuka lapho uzokuthenga khona lo muthi. Akufanele futhi uthole noma yimiphi imithi enjalo kumnikazi webhizinisi omusha futhi, ngoba le mithi ibalulekile futhi idlala indima ebalulekile empilweni yesiguli, ngakho-ke uma kunjalo kufanele uhlale ukholelwa futhi uthenge imithi evela kubadayisi abanolwazi kuphela.
Lokhu kwakungokuphathelene ne-Epithalon Acetate izidakamizwa, kulesi sihloko esingakwazi ukwazi ngezinto ezihlukahlukene Izinzuzo ze-Epithalon acetate, I-Epithalon i-acetate anti-aging feature, izicelo ze-Epithalon i-acetate izidakamizwa nezinye izinto eziningi mayelana nalesi sidakamizwa esingumlondolozi wokuphila kwabaningi.
Sazi ukuthi i-Epithalon i-acetate izidakamizwa isisiza ekwandiseni ubukhulu be-telomere, ekhona amangqamuzana egazi, efihlwa emgodini okhona ebuchosheni bethu. Akukhona nje ukuthi lo muthi uphinde usize ekutheni i-retina yindlebe ikhuphuke. Kuyasiza ngisho nokubulala amangqamuzana omdlavuza kumuntu womuntu.
Ngemuva kwalokho, siyazi mayelana nokusebenza kwalesi sidakamizwa futhi sathuthukela phambili lapho sitshele mayelana nezicelo ze-Epithalon acetate izidakamizwa. Siphinde sazi ngezinzuzo zalesi sidakamizwa, lapho sazi khona ngezinzuzo zalesi sidakamizwa.
Ukusuka kulokho, siyazi ngomthamo walesi sidakamizwa se-epithalon acetate. Umuntu othatha lesi sidakamizwa kufanele ngaso sonke isikhathi anakekele umthamo walo muthi futhi kufanele athathe imithi ngesikhathi esinqunyiwe. Esikhathini esilandelayo, siyazi ngemiphumela emibi yalo muthi, futhi emva kwalokho, siyazi mayelana nemibandela yokugcina yalolu mithi. Kwakukhona isimo esisodwa sokugcina, futhi ekugcineni, siyazi ukuthi kusuka lapho umuntu angathenga khona le mithi nokuthi yiziphi izinyathelo okufanele zithathwe ngenkathi uthenga eyodwa.
I-PT-141 (i-Bremelanotide): Isidakamizwa esisha esetshenziselwa ukungasebenzi komzimba ngokobulili
I-86 (1812) i-4514114